တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: December 2007
ဒီနေ့ ဒီရက်မှာ ...
ဆုတောင်းလိုက်ပါရစေ ... ။
တောင်းတဲ့ ဆုတွေ ...
မှားရင်လည်း မှားနေမယ် ...
နောက်ဆုံး အနေနဲ့ ဖြစ်ဖြစ်
ဆုတောင်းရစ်ခဲ့ပါတယ် ... ။
ကြေကွဲခြင်းများရဲ့ နိဂုံး ...
ခါးသီးမှုတွေရဲ့ နိဂုံး ...
နာကြည်းမှုတွေရဲ့ နိဂုံး ...
စော်ကားမှုတွေရဲ့ နိဂုံး ...
ဖိနှိပ်မှုတွေရဲ့ နိဂုံး ...
၀န်တိုခြင်းတွေရဲ့ နိဂုံး ...
သတ်ဖြတ်ခြင်းတွေရဲ့ နိဂုံး ...
စစ်ပွဲများရဲ့ နိဂုံး ...
စကားအတုတွေရဲ့ နိဂုံး ...
မာန်ထောင်ခြင်းများရဲ့ နိဂုံး ...
စည်းခြားမှုတွေရဲ့ နိဂုံး ...
လောဘ ရမက်များရဲ့ နိဂုံး ...
ဒေါသ အမျက်များရဲ့ နိဂုံး
သောက ရတက်များရဲ့ နိဂုံး ...
နောက်ဆုံး ... နောက်ဆုံး ...
ဒီနေ့ရက်မှာ အဆုံးသတ်ပါစေ ...
ငါ .... ဆုတောင်း နေဦးမှာ
ငြိမ်းချမ်းသာယာ ပါစေသား ...
ရှင်တော်မြတ် ဘုရား ... ။ ... ။
၃၁၊ ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၀၇
Posted by မေဓာဝီ at 10:18 AM5comments
ကျမ ရေးခဲ့တဲ့ "မြနန္ဒာ နှင့် ခရစ်စမတ် ညစာ" ပို့စ်အတွက် ဒီနေ့ ကွန်မန့် တခု တက်လာပါတယ်။ ပို့စ်က အနောက်ရောက်နေပြီမို့ အားလုံး မြင်သာအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
မောင်ချစ်ခိုင် has leftanew comment on your post "မြနန္ဒာ နှင့် ခရစ်စမတ် ညစာ":
မောင်ချစ်ခိုင်ရဲ့ စကားဟာ မှတ်သားလောက်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ တခုတော့ ကျမ ပြောပါရစေ ... ။
ကျမက တကယ်တတ်ပြီး သီချင်းဆိုတဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အဆိုတော် တယောက် မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီလိုပဲ ဒီအစီအစဉ်မှာ ၀င်ရောက် ဆင်နွှဲတဲ့ ကျမတို့ကျောင်းက ဆရာတွေ ကျောင်းသားတွေ အားလုံးလဲ ဘယ်သူမှ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် မဟုတ်ကြပါဘူး။ အားလုံးဟာ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ရဲ့ အဝေးမှာ ရောက်နေစဉ်မှာ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို သတိတရနဲ့ ကိုယ့်တိုင်းပြည် ကိုယ်စားပြု သီချင်းဆိုတယ် ကဗျာရွတ်တယ် ပုံပြင်ပြောတယ်။
အားလုံးဟာ ပညာရှင်တွေ မဟုတ်တဲ့အတွက် သူတို့ လုပ်ရပ်တွေဟာ အမှားမှား အယွင်းယွင်းနဲ့ တလွဲတချော် တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလို ဖြစ်နေစေဦးတော့ လာကြည့်တဲ့သူတွေက ခွင့်လွှတ်ကြပါတယ်။ တယောက်နဲ့ တယောက် အပြစ် မမြင်ကြ ... အပြစ်မတင်ကြ ... မကဲ့ရဲ့ ကြသလို ... ဒါကို ရူးပေါပေါ လုပ်ရပ်လို့လဲ မသတ်မှတ်ကြဘူး ... အဆင့်အတန်း နိမ့်လှချည်လားလို့လဲ မဝေဖန်ကြ ပါဘူး။ အပြစ်မမြင် အပြစ်မတင်တဲ့အပြင် ကိုယ့်တိုင်းပြည်ရဲ့ ကိုယ်စားပြု တခုခုကို ပါဝင်ဆင်နွှဲကြတဲ့ အတွက် လာကြည့်သူ ဧည့်ပရိသတ်က ချီးကျူး သြဘာပြုကြ ပါတယ်။
ကျမသည်လည်း ကမောက်ကမ ဆိုပြခဲ့ရပေမဲ့ ဒါဟာ ရှက်စရာလို့ မသတ်မှတ်ပါဘူး။ ကျမဟာ မြန်မာပြည်သား တယောက်အနေနဲ့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ပွဲတော်တခုက တေးသီချင်းတပုဒ်ကို နိုင်ငံခြားသားတွေ ရှေ့မှာ မိတ်ဆက်ပေးခွင့် ရလို့ ဂုဏ်ယူ ပီတိ ဖြစ်မိပါတယ်။ ကဗျာရွတ်ခဲ့စဉ် တုန်းကလည်း ဒီလိုပါပဲ ... ။ ကျမတို့ မြန်မာမှာ စာပေ နဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ဆိုတာ ရှိတယ်။ အင်္ဂလိပ်လို ဘာသာပြန်တာကအစ မညံ့ဘူးဆိုတာ အများရှေ့မှာ ကျမ ချပြခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးကလည်း အရေးတယူနဲ့ နားထောင် ပေးကြတယ်။ ဒါဟာ ရူးတူး ပေါတော စပ်ဖြီးဖြီးလို့ ဘယ်သူကမှ မပြောခဲ့ကြပါဘူး။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လာရောက် ကြည့်သူ အားလုံးရဲ့ စိတ်ထဲမှာ နှိမ့်ချလိုစိတ် ယှဉ်ပြိုင်လိုစိတ် ကဲ့ရဲ့ ပြစ်တင် လိုစိတ် အလျဉ်းမရှိဘဲ ပျော်ရွှင်တဲ့စိတ် ... ချစ်ခြင်း မေတ္တာစိတ်တွေသာ ပြည့်လွှမ်း နေလို့ပါပဲ ... ။
အရေးတယူ ကွန်မန့်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
၃၀၊ ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၀၇
Posted by မေဓာဝီ at 3:42 PM 12 comments
မှန်တယ်လို့ယူဆရတဲ့ ဘက်မှာ ရပ်တည်
ငါ ... ကူညီပေးခဲ့တယ် ... ။
ကိုယ်စွမ်း ဥာဏ်စွမ်း ရှိသမျှ
ဘ၀ရော ... ဓနရော ရင်းနှီးကာ
ငါ တကယ် ပေးဆပ်ခဲ့တာပါ ... ။
ငါ ယုံကြည်ခဲ့ သူတွေက ...
ငါ့ အရည်အချင်းကို နင်းသွားကြ
ငါ့ လုပ်ရပ်အတွက် အမြတ်ထုတ်ကြ
ငါ့ ဘ၀ ပျက်လု မတတ်
ဇာတ်နာ ခဲ့ရတယ် ... ။
တဘက်က သတိပေး ...
ငါဟာ အောက်တန်းကျသတဲ့ ... ။
လူတွေရဲ့ သဘောကို မအံ့သြမိတော့ပါဘူး ...
လိုတဲ့ အခါ သုံး
မလိုတဲ့အခါ မုန်း ...
ဒါ ... သူတို့ ထုံးစံပဲ ... ။
တူနေတဲ့ နှစ်ဘက် အလယ်မှာ
ရပ်လို့သာ နေမိပါတော့တ ယ်။
၀၀း၁၆ နာရီ
(ခေါင်းစဉ်ကို နဂိုက တန်ဆာခံလို့ မှားယွင်း ရေးမိပါတယ်။ ကိုမိုးထက်နဲ့ အမည်မသိသူက ကွန်မန့်မှာ ပြောပြပေးတဲ့အတွက် အမှန်ကို ပြန်ပြင်လိုက်ပါတယ်။ခုလို ပြင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူး တင်ပါတယ်ရှင်။ )
Posted by မေဓာဝီ at 12:25 AM5comments
Posted by မေဓာဝီ at 3:13 PM2comments
ကမ္ဘာတဘက်ကို ထွက်ခွါ ...
သူ ရောက်လာတော့တယ် .. ။
အဲဒါ ... ည ... တဲ့ ... ။
ပန်းရနံ့တွေက သင်း ... လို့
သဘင်ပွဲ ကျင်းပလျက် ...
ညက ... လွတ်လပ်တယ်
ညက ... အေးမြတယ်
ညက ... တခါတခါ
အလင်းရောင်ရှိတယ် ... ဒါပေမဲ့ မစစ်မှန်ဘူး။
ညက ... မွှေးပျံ့တယ်
ဒါပေမဲ့ ထုံအီလွန်းတဲ့ ရနံ့ ပြင်းပြင်းနဲ့။
တပ်မက်မှုနဲ့ အလိုဆန္ဒတွေ ပေါက်ဖွားတယ်။
တောင့်တမှုနဲ့ မွတ်သိပ်ခြင်းတွေ ကြီးပြင်းတယ်။
မျှော်လင့်မှုနဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းတွေ ရှင်သန်တယ်။
အသင့်ပြင်ပြီး ... ထွက်ခွါ
အဲဒါ အခါမှာ ...
၂၇၊ ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၀၇
ညနေ ၄ နာရီ ၃၇ မိနစ်
Posted by မေဓာဝီ at 4:50 PM6comments
တမိုးသောက်လို့ တနေ့ပြောင်းပြန်ပြီ ... ။
နက်ဖန်ဆို ခရစ်စမတ်နေ့ ရောက်ပြီလေ ... ။
မနက် ၉ နာရီ နေရဲ့ အလင်းရောင်က အရုဏ်တက်ချိန်ပမာ အရှေ့ဘက် ကောင်းကင်မှာ ရောင်နီပျို့လို့ ကောင်းတုန်း။
ခရစ်စမတ် အကြိုနေ့ရဲ့ လမ်းမတွေပေါ်မှာ ကားတွေက ရှင်းလို့ ... ။
ကားမောင်းနေတဲ့ ဦးရီးတော်ရဲ့ ဘေးမှာ ငြိမ်ငြိမ်လေး ထိုင်နေရင်း ကားထဲမှာ ဖွင့်ထားတဲ့ ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကို နာယူနေမိတယ်။ ကားလမ်းရဲ့ ဘေးဘီဝဲယာ တလျှောက်မှာ သစ်ပင်တွေက တရိပ်ရိပ် ကျန်ခဲ့လေရဲ့ ... ။ ဒီလိုပဲ ... အချိန်ဆိုတဲ့ ကာလ ယန္တရားကြီး ဖြတ်သန်းသွားတိုင်း နေ့ရက်တွေ နာရီတွေ တရိပ်ရိပ်နဲ့ ကျန်ခဲ့တာပဲ မဟုတ်လား ... ။ ဒီလိုနဲ့ ကမ္ဘာသုံး ပြက္ဓဒိန် မှာတောင် နှစ်တနှစ် အသစ်ကို ကူးပြောင်း တော့မယ်။ အသစ်နဲ့ အဟောင်း ပြောင်းလဲခြင်းမှာ အသစ်ပြောင်းရင် အဟောင်းတွေက ကျန်ခဲ့ရမှာ ဓမ္မတာပါပဲ ... ။
ဦးရီးတော်ရဲ့ အလုပ်ကိုရောက်တော့ ဟိုတနေ့က ကူလုပ်ပေးရတဲ့ မန်နေဂျာ မမဂျိန်း မလာတာကြောင့် ဘာမှ လုပ်စရာ အထွေအထူး မရှိတာနဲ့ တယောက်ထဲပဲ အခန်းတံခါးဖွင့်၊ ရေဒီယိုဖွင့်၊ ကွန်ပျူတာဖွင့်ပြီး ... ဘလော့လေးဆီ ခြေဦးလှည့်မိတယ်။
ခြောက်ကပ်ကပ် ဘလော့လေးဆီရောက်တော့ မနှစ်က ဘာတွေများ ရေးခဲ့မိပါလိမ့်လို့ အတိတ်ကို ပြန်ပြောင်း အောက်မေ့ မိတော့ ... တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပါပဲ ... မနှစ်က ခရစ်စမတ် အကြိုနေ့က ရေးတဲ့ "ပို့စ်မှာ" လောကဓံကို ခံနိုင်ရည် ရှိချင်ကြောင်း ရေးထားတာကို ပြန်ဖတ်ရတယ်။ ဒီအချိန် ဒီရာသီဆို ဒီလို အတွေးမျိုး တွေးမိတတ်တယ် ထင်ပါရဲ့။
အဲဒီတုန်းက ရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးက ...
ခံနိုင်ပါစေကြောင်း ... ။
............................. တဲ့ ... ။
အဲဒီလို ခဏခဏ ဆုတောင်းပေမဲ့လည်း ခံနိုင်ရည်က ပိုများလာမယ် ထင်ပါသလား ... ။
ကိုယ်က မေတ္တာပေးလို့ မေတ္တာ ပြန်မရတဲ့ အခါ ...
ကိုယ်က ဖြောင့်မှန်ပါလျက် ... ကိုယ့်အပေါ် ကောက်ကျစ်ကြတဲ့ အခါ ...
ကိုယ်က ကရုဏာ ထားပါလျက် ... ကိုယ့်ကို ရက်စက်ကြတဲ့ အခါ ...
သူတပါး ချမ်းသာမှုအပေါ် ကိုယ်က ၀မ်းသာပေးပါလျက် ... ကိုယ်ဒုက္ခ ရောက်မှ သူတကာ ၀မ်းမြောက်ကြတဲ့အခါ ...
အဲဒီလိုတွေ မကြာခဏ ကြုံရတဲ့အတွက် ခံနိုင်ရည်က ပိုလို့သာ ပါးလျား လာပါတော့တယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ မေတ္တာ၊ သစ္စာ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာ တွေဟာ ... အရေး မပါ အရာ မရောက်တဲ့အဆုံး ... အားလုံးကို ဥပေက္ခာပြု လစ်လျူရှု ရပါလို၏ လို့သာ ဆုတောင်း နေမိပါတော့တယ်။
၂၄၊ ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၀၇
၁၁ နာရီ ၂၅ မိနစ်
Posted by မေဓာဝီ at 11:07 AM6comments
လောကမှာ ကံကောင်းခြင်းနဲ့ ကံဆိုးခြင်းက ဒွန်တွဲနေပါတယ်။ ဒီလိုပဲ ကျမဘ၀မှာလည်း ကံကောင်း ကံဆိုးက တလှည့်စီ ဖြစ်နေလေရဲ့ ... ။ ဒီရောက်ကတည်းက အကောင်းနဲ့ ကြုံလိုက် အဆိုးနဲ့ ကြုံလိုက် ဆိုပါတော့ ... ။
"ကောင်းဆိုး နှစ်တန် လောကဓံ" ဆိုတဲ့ စကား အတိုင်း ... အကောင်း ကြုံကြုံ အဆိုးတွေ့တွေ့ ဒါဟာ လောကဓံပဲ လို့ သဘောထားပြီး မတုန် မလှုပ် ခံနိုင်ရည် ရှိချင်ပါတယ်။ ကျမက ကောင်းတာလေးတွေ ကြုံရ တွေ့ရရင် စိတ်ထဲ ပျော်တာက လွဲပြီး ဘာမှ ထွေထွေထူးထူး မတွေးမိပေမဲ့ အဆိုးနဲ့ တွေ့တဲ့အခါ စိတ်ညစ်ရင် ညစ်၊ မဟုတ်ရင်လည်း ဒါဟာ လောကဓံပဲ ဆိုပြီး သံဝေဂ ရတဲ့အခါရ ... ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အမှန်ဆို ပျော်စရာ တွေနဲ့ တွေ့ရင်လည်း ငါတော့ လောကဓံကို ခံနေရပါလား လို့ တွေးသင့်တာပေါ့ ... နော်။
ဒါကြောင့် ကျမဆရာ တယောက်က ကျမကို မင်္ဂလသုတ် ထဲက နောက်ဆုံး မင်္ဂလာ တပါး ဖြစ်တဲ့ ...
စိတ္တံ ယဿ နကမ္ပတိ
ဧတံ မင်္ဂလ မုတ္တမံ။ ... ။
ဆိုတဲ့ အပိုဒ်ကို ဘယ်တော့မှ မမေ့ဖို့ ပြောပြီး အမြဲ ရွတ်ခိုင်းပါတယ်။
ဆရာပြောသလို အမြဲမဟုတ်တောင် တခါတလေ ရွတ်ဖြစ်ပေမဲ့ လောကဓံဆိုတာကို အဆိုးပဲလို့ စိတ်ထဲ စွဲနေမိတုန်းပါပဲ။ အခု လတ်တလော ကျမ ကြုံရတဲ့ ကံကောင်း ကံဆိုး လောကဓံတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောရမယ်ဆိုရင် ...
ကံကောင်းချင်တော့ ကျောင်းရက်ရှည် ပိတ်တယ်။ ကံဆိုးချင်တော့ ချစ်လှစွာသော အမက တရက်မှ မနားခိုင်းဘဲ တခြားမြို့က ဦးရီးတော်ဆီကို ချက်ချင်း စေလွှတ်ခြင်း ခံရတယ်။
ကံကောင်းချင်တော့ ဦးရီးတော်က တကိုယ်တည်း လူပျိုကြီးမို့ နေရထိုင်ရ အဆင်ပြေတယ်။ (မိန်းမရှိရင် သူကလည်း အလည်ခေါ်ချင်မှ ခေါ်မှာ :P)
ကံဆိုးချင်တော့ သူ့အိမ်မှာ အင်တာနက် မရှိဘူး။ (မဟာ ကံဆိုးခြင်းပဲ :(
ကံကောင်းချင်တော့ သူက သူ့အလုပ်ကို အလည် ခေါ်သွားတယ်။ (အိမ်မှာဆို တယောက်ထဲ ပျင်းနေမှာကိုး)
ကံဆိုးချင်တော့ အလုပ်ထဲမှာ ဟိုဟာ ဒီဟာ ကူလုပ်ရတယ်။ (နားတော့သိပ်မလည်ဘူး။ လုပ်ဆို လျှောက်လုပ်လိုက်တာပဲ။ မှားရင်တော့ ဒုက္ခ)
ကံကောင်းချင်တော့ အလုပ်ထဲမှာ အင်တာနက် သုံးခွင့်ရတယ်။ (မဟာကံကောင်းခြင်း ဆိုပါတော့)
ကံဆိုးချင်တော့ ကိုယ့်ဘလော့ကိုယ် အစအဆုံး မမြင်ရဘူး။ (နိုဝင်ဘာလ ထိပဲ မြင်ရတယ်၊ ဘာလို့လဲ မသိ။)
ကံကောင်းချင်တော့ ဘလော့ အတွက် စာရေးဖို့ အချိန်လေး နည်းနည်း ... ဟိုလူ ဒီလူနဲ့ ဂျီတော့ခ်မှာ ဘာညာ သာရကာ ပြောဖို့ အချိန်လေး နည်းနည်း ရတယ်။
ကံဆိုးချင်တော့ ဖုဌဿ ကို ရိုက်တာ ဌ၀မ်းဘဲမှာ အရစ်ပါတာ ရှာလို့ မရလို့ အမှားကြီးအတိုင်းပဲ ရိုက်ခဲ့ရတယ်။ (ဖြည့်စွက်ပြီးသာ ဖတ်လိုက်ကြပါတော့)
ကံကောင်း ချင်တော့ ... ဒီစာလေးကို ရေးပြီး တင်ဖြစ်သွားပါတယ်။
ကျမဘလော့ကို လာမိသူများအတွက်တော့ ... ကံဆိုးချင်တာပဲလား မသိ။
၂၁၊ ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၀၇
ညနေ ၄ နာရီ ၀၅ မိနစ်
(နက်ဖန် သဘက်ခါက ဦးရီးတော်ရဲ့ အလုပ်ပိတ်ရက်မို့ အင်တာနက်နဲ့ ဝေးရ ပြန်ဦးမည် ...)
Posted by မေဓာဝီ at 4:07 PM7comments
ခရစ်စမတ်နဲ့ နှစ်သစ်ကူး ကျောင်းရက်ရှည် ပိတ်မှာမို့ ကျောင်းတော်ကြီးကို နှုတ်ဆက်ပြီး ကျမ အိမ်ပြန်ဖို့ စီစဉ်ရပါတယ်။ တကယ်တမ်း ကျောင်းက ၂၁ ရက် နေ့မှ ပိတ်မှာပေမဲ့ ကျမက ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် ၁၉ ရက်နေ့ကတည်း က ပြန်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး ဆရာ ဆရာမတွေကို ပြောခဲ့တယ်။ ၂၀ ရက်နေ့ဆို တခြား တမြို့က ဦးရီးတော်ဆီ သွားရမှာမို့ပါ။ ကျောင်းကို ခွဲရတော့မယ် ဆိုမှ ကျောင်းကြီးက လှနေသလိုလို… ။ ဒီကနေ့က နေသာပြီး ရာသီဥတု သာသာ ယာယာ ရှိတာနဲ့ ကျောင်းထဲမှာ ဓာတ်ပုံ လျှောက်ရိုက်ဖြစ်တယ်။
အဲဒါက ကျောင်းရဲ့ ပင်မအဆောက်အဦး ကြီးပေါ့။ ခရစ် သက္ကရာဇ် ၁၇၀၀ ကျော် လောက်က ဆောက်ခဲ့တဲ့ အဆောက်အဦးလို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီအဆောက်အဦးတွေကတော့ Mozambique, Chinese Embassy, Malawi လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ အဆောက်အဦးတွေပါ။ ကျမနေတဲ့ Malawi က ဟိုးနောက်ဆုံးမှာ။
အဆောင်တွေနောက်က သစ်ပင်တန်း … လွမ်းမယ်ဆို လွမ်းချင်စရာပေါ့ … ။
ကျမတို့ ဖြတ်သန်း နေကျ ကွန်ကရစ်လမ်းကလေး နဲ့ မြက်ခင်းပြင်ကြီး။ ဟိုတလောက ငိုနေတဲ့ မြက်ကလေးတွေ … ခုတော့လည်း … ။
သူ့နာမည်က “ဆာရှာ” တဲ့။ တခါတခါ သူနဲ့ ဘောလုံး ပစ်တမ်း ကစားကြတယ်။
အ၀င်ဝက ဒီအရုပ်ကြီးတွေကို သဘောကျလို့ … အမှတ်တရ ရိုက်ယူခဲ့တယ်။
အခုတော့လည်း ထမင်းစားခန်းကြီးက သန့်ရှင်းလို့ … ။ များသော အားဖြင့် ကတော့ ရှုပ်ပွနေတတ်လို့ပါ။
ထမင်းစားခန်းထဲမှာ ကပ်ထားတဲ့ စာတွေကို သဘောကျမိလို့။
If you want to change the world, we need to change ourselves first!!! တဲ့။
Your mother is not here. Please clean up your own mess including you!! တဲ့။
အဲဒါကတော့ အမှိုက်ပုံးတွေ အနားမှာ ကပ်ထားတာတွေပါ။
ကဲ … သွားတော့မယ် ကျောင်းကြီးရေ … ။ နှစ်ပတ်တာတော့ ခွဲနေရဦးမယ်။
ပြန်လာတဲ့အခါ … ကြိုနေပါ … အခုတော့ ခဏ တာ့တာ … ။
၁၉၊ ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၀၇
ည ၁၁ နာရီ ၄၅ မိနစ်
ဦးရီးတော် အိမ်မှာ အင်တာနက် သုံးဖို့လည်း မသေချာလို့ … ဘလော့ ဖတ်သူ အပေါင်းကို ဒီပို့စ်လေးနဲ့ ခဏ တာ့တာ လုပ်ပါရစေ … ။ အကယ်၍ … အကယ်၍ ပေါ့လေ … ဒီနှစ်ပတ် အတွင်း အင်တာနက် သုံးစွဲခွင့်ရခဲ့ရင်တော့ စာတွေ တင်ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။ မရခဲ့ရင်တော့ … … …. :(
Posted by မေဓာဝီ at 11:55 PM9comments
Posted by မေဓာဝီ at 11:45 PM9comments
မြေပုံတချပ်နဲ့ ရယ်ပေါ့ ... ။
ဒီအချိန်မှာ ... ခံစားနိုင်စွမ်း မရှိတော့ ... ။
ကဲ့ရဲ့ သူက ကဲ့ရဲ့
မဲ့ရွဲ့ကာ စကားတင်းဆို ...
တချို့ကတော့ ကြိုဆိုကြပါရဲ့ ...
ဒါပေမဲ့ .… .…
ဘယ်ဆီကို ရောက်နေသလဲ ...
အရှေ့ အနောက် တောင်နဲ့ မြောက်လည်း
ယောင်ဝါးဝါးနဲ့ လျှောက်နေဆဲ ...
ဖိနပ်လည်းပေါက် ... ခြေထောက်လည်းနာ
ရင်ထဲမှာတော့ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ ... ။
ဟိုးရှေ့မှာ လမ်းခွဲ ...
မတ်တပ်ရပ်ကာသာ နေမိပြီလေ ... ။
၁၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၇
ည ၁၀ နာရီ ၁၅ မိနစ်
Posted by မေဓာဝီ at 10:18 PM 1 comments
ဒီတပတ် ကျောင်းကနေ အိမ်ပြန်ခွင့်ရလို့ အိမ်ရောက်တဲ့အခါ ဗမာပြည်က မိဘများ ပို့လိုက်တဲ့ ပါဆယ်ထုတ် ရောက်နေတာကို တွေ့လိုက်ရတော့ ၀မ်းသာ သွားတယ်။ အထုတ်ကို ဖောက်ကြည့်တော့ ရွှေတိဂုံဘုရားပုံပါ ၂၀၀၈ ပြက္ခဒိန် ၃-ခု၊ ဝေနေယျသုခ ရေချမ်းစင် ပြက္ခဒိန် ၂-ခု နဲ့ စာအုပ်တွေပါ။ စာအုပ်တွေထဲ မှာ အဖေရဲ့ ပရိတ်စာအုပ်တွေအပြင် ကျမ ဒီကိုမလာခင် လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ “သတိပဋ္ဌာန်ဝတ္ထု” (ဆရာတော် ဦးသီရိ) စာအုပ် ၂-အုပ်ပါ ပါလာပါတယ်။ ကျမ ကြည့်ရအောင် အဖေက ထည့်ပေးလိုက်တာ တဲ့။ အဲဒီစာအုပ်က ကျမ ရှိတုန်းက ပုံမနှိပ်ရသေးပါဘူး။ ခု ကိုယ်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ စာအုပ်ကလေးကို မြင်ရ တဲ့အခါ ပီတိတွေ တဖြာဖြာနဲ့ လူတကာကို လိုက်ကြွားပြီး နောက် … ထပ်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။
စာမူအနေနဲ့ ဖတ်ရတုန်းကနဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ပြီးနောက် ဖတ်ရတဲ့ အရသာ မတူပါဘူး။ အခုမှ ပိုပြီး အရသာရှိသလို … စီးစီးပိုင်ပိုင် လေးလေးပင်ပင် ရှိသလို ခံစားရတယ်။ ဘာလို့လဲတော့ မပြောတတ်ပါဘူး။ ဖတ်ရင်းနဲ့ တနေရာမှာ သံယောဇဉ် အကြောင်း ရေးထားတာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ သံယောဇဉ် ဆိုတဲ့ စကားကို ကျမတို့ အမြဲ သုံးစွဲနေကြပေမဲ့ သေသေချာချာ မသိခဲ့ပါဘူး။ ဖတ်ခဲ့ဖူး သင်ခဲ့ဖူးပေမဲ့လည်း … ကြာတော့ မေ့ပျောက် သွားပြန်ပါရော … ။
ဒါနဲ့ သံယောဇဉ် ၁၀-ပါး အကြောင်း ကျမဘလော့မှာ တင်ဖို့ စိတ်ကူး မိပါတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မမေ့မလျော့ဖို့နဲ့ … မသိသေးသူများကို ဝေမျှလို လို့ ပါပဲ။ ဗုဒ္ဓတရားတော် တွေကို ဝေမျှတဲ့နေရာမှာ ဆင်းရဲ ချမ်းသာ အယုတ် အလတ် အမြတ် လူတန်းစား မရွေး ဝေမျှခွင့်ရှိတယ် လို့ ကျမကတော့ ယူဆပါတယ်။ ပါရမီ နည်းသေးလို့ ကိုယ်တိုင် အားသွန်ခွန်စိုက် မကျင့်နိုင် သေးသည့်တိုင် ကိုယ်သိထား သလောက်လေးကို ပြန်လည် ဝေမျှ ကောင်းရဲ့ မဟုတ်လား။ ဒါ့အပြင် အလှူတကာ့ အလှူထဲမှာ တရားအလှူ (ဓမ္မ ဒါန) က အမြတ်ဆုံးလို့ ဆိုထားတဲ့အတွက် ကျမ ဖတ်ရှုမိတဲ့ တရားတော်ကို ကျမဘလော့ဖတ်သူ အပေါင်းအား ပြန်လည် ဝေမျှ ဒါန ပြုလိုက်ပါတယ်ရှင် … ။
ချစ်သားရဟန်းတို့ … တရားကို အစဉ်ရှု၍ နေရာ၏။ အဘယ်တရားကို ရှုရာ သနည်းဟူမူကား အတွင်း, အပ ၌ ဖြစ်သော အာယတန တရားတို့ကို အစဉ် ရှု၍ နေရာ၏။ အဘယ်သို့ ရှုရာသနည်း ဟူမူကား …
[၁-၂] စက္ခုဝိညာဉ်ကိုလည်း သိရာ၏၊ ရူပါရုံကိုလည်း သိရာ၏၊ ထိုစက္ခု ၀ိညာဉ်နှင့် ရူပါရုံတို့ ထိပါးကြသောအခါ သံယောဇဉ် ၁၀-ပါး တို့သည် ဖြစ်ကုန်၏။ ဖြစ်ဟန်ကား …
၁) အလိုရှိသော အာရုံ ကို မြင်ရသောအခါကာမဂုဏ်၌ ယစ်တတ်သော ကာမရာဂ သံယောဇဉ်။
၂) ရူပါရုံ၌ ယစ်တတ်သော ရူပရာဂ သံယောဇဥ။်
၃) နာမက္ခန္ဓာ လေးပါး၌ ယစ်တတ်သော အရူပရာဂ သံယောဇဉ်။
၄) ထိုရူပါရုံကို သူတပါးတို့နှင့် ရောယှက်သောအခါ အမျက်ထွက်တတ်သော ပဋိဃ သံယောဇဉ်။
၅) ဤရူပါရုံကို ငါသာလျှင် ရပေသည်ဟူ၍ ထောင်လွှားတတ်သော မာန သံယောဇဉ်။
၆) ဤရူပါရုံသည် ကောင်းမွန်တင့်တယ် လှပေ၏ ဟု မှားသော နှလုံးသွင်းခြင်း တည်းဟူသော ဒိဋ္ဌိ သံယောဇဉ်။
၇) ငါသည် ဤသို့သော သီလကြောင့် ဤသို့ သဘောရှိသော ရူပါရုံနှင့် တွေ့ရပေသည်ဟု သုံးသပ်ခြင်း တည်းဟူသော သီလဗ္ဗတပရာမာသ သံယောဇဉ်။
၈) ထိုရူပါရုံသည် ပျက်စီးခဲ့သောအခါ အလွန်ပျံ့လွင့်ခြင်း, စိုးရိမ်ခြင်း တည်းဟူသော ဥဒ္ဓစ္စ-ကုက္ကုစ္စ သံယောဇဉ်။
၉) ယောက်ျားလော, မိန်းမလော, ပုဂ္ဂိုလ် သတ္တ၀ါလော ဟု ယုံမှားခြင်း ၀ိစိကိစ္ဆာ သံယောဇဉ်။
၁၀) သစ္စာလေးပါး၌ မသိသော အ၀ိဇ္ဖာ သံယောဇဉ်။
ဤ ဆယ်ပါးသော သံယောဇဉ်တို့သည် ဖြစ်လေကုန်၏။ ထိုသို့ ဖြစ်သော သံယောဇဉ်တို့ကိုလည်း သိရာ၏။ ထိုသို့မဖြစ်သေးသော သံယောဇဉ်တို့၏ ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း သိရာ၏။ ထိုသို့ သံယောဇဉ်တရား ဖြစ်သော အခါ ၀ိပဿနာ ဘာဝနာဖြင့် ပယ်ရာ၏။ ထိုသို့ ပယ်ကြောင်းကိုလည်း သိရာ၏။ ထိုသို့ ၀ိပဿနာ ဘာဝနာဖြင့် ပယ်အပ်ကုန်သော သံယောဇဉ်တို့သည် နောင်သောအခါ မဂ်ဥာဏ်, ဖိုလ်ဥာဏ်ဖြင့် မဖြစ်လေကုန်ပြီ၊ ထိုသို့ မဖြစ် ကြောင်းကိုလည်း သိရာ၏။
[၃-၄] သောတ၀ိညာဉ် နဲ့ သဒ္ဒါရုံ
[၅-၆] ဃာန၀ိညာဉ်နဲ့ ဂန္ဓာရုံ
[၇-၈] ဇိဝှာဝိညာဉ်နဲ့ ရသာရုံ
[၉-၁၀] ကာယ၀ိညာဉ်နဲ့ ဖောဋ္ဌဗ္ဗာရုံ
[၁၁-၁၂] မနောဝိညာဉ်နဲ့ ဓမ္မာရုံ … တို့ကိုလည်း နည်းတူ သိနိုင်ပါတယ်။
ဤသို့ သံယောဇဉ်တရားတို့သည် ရှိ၏ ဟု နှလုံးသွင်းနေသော ယောဂီ ပုဂ္ဂိုလ် တို့အား အလွန်ထင်ရှားသည် ဖြစ်ကုန်၏။ အကြင်မျှလောက် သံယောဇဉ် တို့၌ အောက်မေ့ရသော အကျိုးကား - ပညာ၏ ပြန့်ပွါးခြင်းငှာ လည်းကောင်း၊ အောက်မေ့ ဆင်ခြင်ခြင်း သတိသမ္ပဇည နှင့် ပြည့်စုံခြင်းငှာ လည်းကောင်း ဖြစ်၏။ တဏှာ, မာန, ဒိဋ္ဌိတို့ကို မမှီမူ၍ နေရာ၏။
ဤသို့လျှင် အတွင်း အပ သန္တာန်၌ ဖြစ်သော အာယတနဟူသော လောက၌ တစုံတခုသော ရုပ်, နာမ်, သင်္ခါရ တို့သည် ငါ၏ ဥစ္စာ ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ ငါ ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ ငါ၏ ကိုယ် ဟူ၍ လည်းောင်း မဆိုရချေ။ ဤသို့လျှင် ၀ဋ်သုံးပါးမှ ထွက်မြောက်ခြင်းကို အလိုရှိသော ရဟန်း ရှင် လူ ယောက်ျား မိန်းမ စသော ယောဂီ ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် အာယတန သံယောဇဉ် ဟူသော တရားတို့ကို အစဉ်ရှုလျက် ကောင်းစွာ နေရာ၏ - ဟူလိုသော်။
သံယောဇဉ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ ဒီမျှပါပဲ။ ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ သံယောဇဉ် ဆိုတာဟာ ကောင်းတာမဟုတ် .. ပယ်ရမယ့် တရားလို့ သဘောပေါက်ပြီး နောက် … အရာရာကို သံယောဇဉ် ဖြတ်ဖို့ ကြိုးစားရင် ကောင်းလေမလား တွေးမိ နေပါတော့တယ်။
၁၅၊ ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၀၇
ည ၁၁ နာရီ ၅၉ မိနစ်
[၀န်ခံချက် - ဆရာတော်ဦးသီရိ၏ သတိပဋ္ဌာန်ဝတ္ထု မှ … ]
Posted by မေဓာဝီ at 12:05 AM9comments
Posted by မေဓာဝီ at 5:22 AM5comments
ငယ်ငယ်တုန်းက ကစားခဲ့ဖူးတဲ့ ကစားနည်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တွေးမိတဲ့ အတွေးလေးတွေကို ဘလော့မှာ ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။
အခုလည်း "ကုန်းလား ရေလား" ကစားနည်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တွေးမိတွေးရာ တွေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ အတွေးတွေကို စာလုံးတွေအဖြစ် ပုံဖော်ရင်း ရေးမိရေးရာ ဘလော့ပေါ်မှာ ချရေးလိုက်မိပါတယ်။
"ကုန်းလား ... ရေလား"
ကုန်းလား ... ရေလား???
((( ကုန်း )))
နင့်ကုန်းပေါ် ငါတက်တယ် ... ဘာဖြစ်သလဲ ကွယ် ...
((( ရေ )))
နင့်ရေထဲကို ငါဆင်းတယ် ... ဘာဖြစ်သလဲ ကွယ် ...
ငယ်ငယ်တုန်းက ကစားခဲ့ကြဖူးသည့် ကစားနည်းလေး တခု ဖြစ်သည်။ အိမ်အ၀င်ဝ အတက်အဆင်း လှေကားထစ်တွေမှာ ကုန်းလား ရေလား ခဏခဏ ကစားခဲ့ကြသည်။ လိုက်ရမည့်သူက လှေကားထစ် အပေါ်မှာနေ ... ကျန်သူတွေက လှေကားထစ်အောက် မြေပြန့်ကနေပြီး အထက်ပါ အတိုင်း အမေး အဖြေ လုပ်ကာ ကစားရသည့် ကစားနည်းလေးပင်။
လိုက်သူက "ကုန်း" ဟု ဖြေလျှင် ... သူက ကုန်းပေါ်မှာသာ နေပြီး ကျန်သူများက ရေထဲမှာ နေရသည်။ လိုက်သူက "ရေ" ဟု ဖြေပါက ရေဟု သတ်မှတ်ထားသည့် မြေပြင်ပေါ်ကို ဆင်းရပြီး ကျန်သူများက ကုန်းပေါ် ပြေးတက်ကြရသည်။ ထိုသို့ သူရွေးချယ်ထားသည့် နေရာမှ နေပြီး သူ့နယ်မြေ ကျူးကျော်လာသူ ကျန် ကစားဖော်များကို လိုက်ဖမ်းရ၏။ လိုက်ဖမ်းလို့ မိပါက မိသူက တခါ ပြန်လိုက်ရ ပြန်သည်။
အဆိုပါ ကစားနည်းလေးကို ငယ်ငယ်တုန်းက ခဏခဏ ကစားခဲ့ကြသည်။ အိမ်မှာက ၀င်ပေါက် နှစ်ပေါက် ရှိတာမို့ လှေကား နှစ်ခု ရှိသည်။ တဘက်က ပြေပြေပြစ်ပြစ်၊ တဘက်ကတော့ အနည်းငယ် မြင့်ပြီး မတ်သည်။ ခက်ခက်ခဲခဲ ကစားချင်ကြလျှင် မြင့်သည့်ဘက်မှာ ကစားလေ့ရှိကြ၏။
အခုအချိန်မှာ ဒီကစားနည်းလေးကို ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပြီး ... သူသာဆိုလျှင် ကုန်းလား ရေလား ဘယ်လို ရွေးချယ် မလဲ ... တွေးမိပြန်သည်။ ဒီနောက်မှာ ထပ်မံ အတွေးနယ်ချဲ့ မိတာက ... သူတို့မွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့ရာ တိုင်းပြည်ကြီးက ကုန်း ... ဆိုပါတော့ ... ။ ရေ ဆိုတာကတော့ အခြား တိုင်းပြည် နိုင်ငံ အသီးသီးပေါ့ ... ။
အားလုံးလိုလိုကတော့ အေးမြမယ်ထင်တဲ့ ရေထဲကို ဆင်းချင်ကြသည်။ ရေပြင်ကြီးက လှိုင်းကြက်ခွပ် ကလေးတွေနဲ့ လှလည်းလှပ၊ ကျယ်လည်း ကျယ်ပြန့်၊ စိတ်ဝင်စားစရာတွေလည်း ပေါသကိုး။ ဒီလိုနဲ့ ရေကိုရွေးချယ်ပြီး ရေထဲကို တကယ်တမ်း ရောက်တဲ့အခါ မှာ ... ။
ရေမကူးတတ်သူများ တော်တော် ဒုက္ခရောက်ကြရပြန်သည်။ အနည်းအကျဉ်း ရေကူးတတ်သူ များကတော့ အနည်းအကျဉ်းသာ ဒုက္ခတွေ့နိုင်ပြီး ရေကူး ကျွမ်းကျင်သူ သက်လုံကောင်းသူများ အတွက်ကတော့ ရေပြင်မှာ နေပျော်သည်ပေါ့။ ရေငုပ်ဝတ်စုံ အောက်စီဂျင်ဘူး စသည့် အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းများ ၀တ်ဆင်ရန် တတ်နိုင်သူ လူနည်းစု အဖို့ကတော့ ရေပြင်သည်လည်း မြေပြင်ပမာပါပဲ ... ။
ဒီလိုနှင့် ရေပြင်ထဲမှာ တချို့လည်း ယက်ကန် ယက်ကန်၊ တချို့လည်း အလိုက်သင့် စီးမျော၊ တချို့လည်း စုန်ဆန် ကူးခတ်၊ တချို့က ရေအောက် နက်သည်ထက် နက်အောင် ငုပ်လျှိုးသွားကြသည်။ မကူးတတ် ကူးတတ် အားသွန် ခွန်စိုက် ကူးခတ်ရင်း ခြေကုန်လက်ပမ်းကျကာ ရေအောက်မှာ စုံးစုံး နစ်မြုပ် သွားသူ တချို့တလေလည်း ... ရှိနေဆဲ ... ။
ရေထဲမှာတော့ ကျင်လည်စွာ ကူးခတ်နေကြသော ... ရောင်စုံ ငါးကလေးတွေ၊ ထူးဆန်း လှပသော သတ္တ၀ါ မျိုးစုံတွေက ဖျားယောင်း မြှူဆွယ် နေကြ ပေလိမ့်မည်။ ရေအောက်သို့ နက်သည်ထက် နက်အောင် ငုပ်လျှိုးနိုင်လျှင် ရေအောက်၏ ထူးဆန်းလှပမှု များစွာ၊ အံ့သြဖွယ်ရာ များစွာ၊ အဖိုးတန် ရတနာ များစွာနှင့် ကြုံတွေ့ရမည် အမှန်ပင်။
ရေပြင်နှင့် မြေပြင်က ဖိအားချင်းတူသည် မဟုတ်။ ရေအောက်သို့ နက်လေ ရေဖိအားက ပိုများလေလေ... ပို၍ မွန်းကျပ်လေလေ ... ကုန်းပေါ်ပြန်တက်ဖို့ ပိုခက်လေလေ ...။ နောက်ဆုံးတော့ ... ရေထဲမှ လူသားများ ကုန်းမြေကိုသာ ပြန်လည်၍ တမ်းတမိကြမည်။ ကုန်းပေါ်မှာ ရှင်သန်လျက် အသက်၀၀ ရှူချင်ကြမည်။ ကုန်းသတ္တ၀ါတွေဟာ ရေထဲမှာ ကြာကြာနေနိုင်ပါ့မလား ... ။ ရေဟာ ဘယ်လောက် အေးမြ လှပ ဆန်းကြယ် နေလင့်ကစား ကိုယ့်ရပ်ဌာနေ ကုန်းမြေ ကိုသာ ပြန်လည်ခြေချ လိုကြတာ အမှန်ပဲ မဟုတ်လား။
ဤနည်းနှင်နှင်ပါပဲ။ သာယာအေးမြလှပါတယ်ဆိုတဲ့ ရေထဲမှာ အမြဲမနေလိုပါ။ မနေနိုင်ပါ ... ။ အခြေအနေတခုရဲ့ တွန်းပို့မှုကြောင့် ကုန်းလား ရေလား ရွေးချယ် မနေနိုင်အားဘဲ ရေထဲသို့ ဆင်းသက်ခဲ့ရသည်။ ရေကူး မကျွမ်းကျင်သူမို့ ရေထဲမှာ အားတင်းစွာ ကူးခတ်ရင်း ရုန်းကန်နေရဆဲ ... ။ တခါတလေလည်း မွန်းကျပ်တဲ့ ဒဏ်တွေ ခါးသီးစွာ ခံရပြန်သေးသည်။
မည်သို့ပင် ဖြစ်စေ ...
တချိန်ချိန်မှာတော့ ... ကုန်းမြေပြင်ပေါ် ကောင်းမွန်စွာ ပြန်လည် တက်ရောက်နိုင်ရန် ကြိုးစားရပါဦးမည်။ ထိုအချိန်မှာ သူတို့၏ ကုန်းမြေသည်လည်း သာယာ လှပ ပြည့်စုံ နေလိမ့်မည်လေလား ... မျှော်လင့်စွာ တွေးနေမိပါတော့၏။
၁၃၊ ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၀၇
ည ၁၀ နာရီ ၂၄ မိနစ်
Posted by မေဓာဝီ at 5:15 AM9comments
အမှန်တရားဟာ … ခါးသီးသတဲ့ …
မက်မောစွာ စားသုံးရင်း …
အမှားများနဲ့ ကြီးပြင်းခဲ့တယ် … ။
အမှားကို အမှားမှန်း မသိတဲ့ အမှားက
အကြီးဆုံး အမှား တဲ့ …
အမှားကို အမှားမှန်း သိလျက်နဲ့
မှားပြီးရင်း ဆက်ဆက် မှား
အမှန်ကိုလည်း မမြင်မိတော့ … ။
ချိုတော့ ချိုမြိန်လှပါရဲ့ …
အစက မသိခဲ့မိဘူး … ။
ခံစားရ ခက်လွန်းတော့မှ …
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတိထားကြည့် …
ငါဟာ အဆိပ်မိနေပြီလား … ။
ဟဒယဆီထိ တိုင် …
လက်တွေ့မှာ ဝေးလွန်းလှပါရဲ့ … ။
ငါဟာ … အန္ဓ တယောက်ပါလား … ။
နေ့လည် ၂ နာရီ ၀၅ မိနစ်
Posted by မေဓာဝီ at 2:10 PM3comments
ပင်လယ်ကတော့ သူ့ဆီလာသူ အားလုံးရဲ့ ခြေအစုံကို ဦးတိုက်လို့ ကြိုဆိုနေလေရဲ့ ... ။ ညင်သာတဲ့ လှိုင်းလုံးလေးတွေ ဖြည်းဖြည်းချင်း ကမ်းခြေကို ရိုက်ခတ်ပြီး ... ပြန်လျှောကျသွားတိုင်း ... ရေမြှုပ် ဖွေးဖွေးလေးတွေ သောင်ပြင်မှာ ပလုံစီလို့ တင်ကျန်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ... တကယ့်ကို ခဏလေးပါပဲ ... ပျောက်ကွယ်သွားကြ ပြန်ပါရော ... ။
ခြေတလှမ်း နင်းလျှောက်လိုက်တိုင်း သဲပြင်ပေါ်မှာ ထင်ကျန်ခဲ့တဲ့ ခြေရာတွေ ... ။ တလှမ်း ... နှစ်လှမ်း ... သုံးလှမ်း ... ခြေလှမ်းပေါင်းများစွာ လှမ်းရင်း ကမ်းခြေတလျှောက် လမ်းလျှောက်နေခဲ့တယ်။ နူးညံ့တဲ့ သဲပြင်ပေါ်မှာ ခြေရာတွေ ထင်ကျန်နိုင်ပေမဲ့ ... မာကျောတဲ့ ကျောက်ဆောင်ပေါ်မှာတော့ ဘယ်လောက်ပဲ လျှောက်လှမ်းလှမ်း ခြေလှမ်းတိုင်းအတွက် အမှတ်အသားတွေ ထင်ကျန် နိုင်ပါ့မလား .. ။
ရာသီက အေးပေမဲ့ ကမ်းခြေက နေသာတယ်။
ညီညာ ပြန့်ပြူးတဲ့ ကမ်းခြေတလျှောက် လမ်းလျှောက်သူတွေ ... ဆော့ကစားသူ ... ကလေးတွေ ... ခွေးတွေ ... ဟိုတစု ... သည်တစု ... ။
ဆူဆူညံညံ အသံကြားလို့ ကြည့်လိုက်တော့ ယောနသန်ရဲ့ အမျိုးအဆွေ ... စင်ရော်ငှက် ကလေးတွေ ... ။ ဒီစင်ရော်လေးတွေထဲမှာ ယောနသန်လို စင်ရော် တကောင် တလေများ ပါမလား တွေးရင်း ရစ်ချတ်ဘာ့ခ်ရဲ့ စာသားတချို့ သွားသတိရမိတယ်။
“Remember, Jonathan, heaven isn'taplace oratime because place and time are so very meaningless. Heaven is...”
ဟုတ်သားပဲ ... ။ အချိန်တွေ နေရာတွေဆိုတာ အဓိပ္ပါယ် မရှိတဲ့ အရာတွေ ... ။ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ ဘယ်နေရာမှာလဲ ... လက်ညှိုးညွှန်ပြလို့ ရနိုင်ပါ့မလား ... ။
ဒီလိုနဲ့ သူတို့လေးတွေကို ပါလာတဲ့ ပေါင်မုန့်အပိုင်းအစလေးတွေ တဖဲ့စီ ဖဲ့ကျွေးတော့ ဆူညံညံ အသံနဲ့ ကရိကရိ ကွက် ကွက် အော်ဟစ်ရင်း မုန့်ကို အလုအယက် စားနေကြတာ ပျော်စရာပဲ ... ။
နေစောင်းတာနဲ့ တဖြည်းဖြည်း အေးသည်ထက် အေးလို့လာတယ်။ အဆုံးမဲ့တဲ့ ပင်လယ်ကြီး ကိုငေးကြည့်ရင်း ... ဟိုမှာဘက်ကမ်းမှာ ကိုယ့်ဌာနေများ ရှိလေမလား ... ရော်ရမ်း မှန်းဆနေမိပြန်တယ် ... ။
ကြည့်နေရင်း ကြည့်နေရင်း ... မျက်လုံးတွေ ပူနွေး စိုစွတ်လာပြီး အရာရာဟာ တဖြည်းဖြည်း ဝေ ... ၀ါး ... လို့... ။ ပင်လယ်ရေပြင်တောင် မြင့်တက်လာလေသလား ... ထင်ယောင် ထင်မှား ဖြစ်ခဲ့ရပေါ့။
စောစောက ပျံသန်းနေကြတဲ့ စင်ရော်လေးတွေလည်း အတောင်ညောင်း နေကြရှာသလား မသိ ... လှိုင်းစီးရင်း အနားယူ နေကြပြီ။
သွားတော့မယ် ... ။
ပင်လယ်ကြီးကို နှုတ်ဆက်တော့ ... လေညင်းလေးက ခပ်ဖွဖွ နမ်းရှိုက်ရင်း ပါးပြင်ပေါ်က အရာတွေကို အေးစက် ခြောက်သွေ့စေတယ်။
ဒီလိုနဲ့ တနေ့တာ ကုန်ခဲ့ပေါ့ ... ။
နေမင်းက နှုတ်ဆက် ခွဲခွါ သွားပြန်ပြီ။
နေ့တာက တိုတောင်းလွန်းလှတယ် ... ။
ပင်လယ်ကတော့ အထီးကျန်နေတဲ့ ကမ်းခြေဆီ လှိုင်းလုံးလေးတွေ ရိုက်ခတ် ပို့ပေးရင်း ... လူတကာ နင်းခဲ့တဲ့ ခြေရာတွေ ... လူတကာ ချခဲ့တဲ့ သက်ပြင်းတွေကို ပြန်လည် သယ်ဆောင်သွားလေရဲ့ ... ။
၁၁၊ ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၀၇
ည ၁၀ နာရီ ၀၅ မိနစ်
Posted by မေဓာဝီ at 5:26 AM0comments
ရရှိထားတဲ့ ဘ၀လေးဟာ ... ခဏလေး ... ။
မွေးဖွားခြင်းနဲ့ သေဆုံးခြင်းရဲ့ အကြား
ရှင်သန်သွားရချိန်က ... ခဏလေး ... ။
ဆုံဆည်းရချိန်က ... ခဏလေး ... ။
တွေ့ကြုံ ဆုံဆည်းချိန်မှာမှ ...
နားလည်မှုများစွာထား ... နှစ်ဦးသားဘ၀
ပျော်ရွှင်ကြရချိန်က ... ခဏလေး ... ။
အကြာကြီး ဖြစ်လိုက်ချင်ပါရဲ့ ...
အမြဲ ပျော်ရွှင်ရပါစေသား ...
ခဏလေးများရယ် ... ။ ... ။
၁၀၊ ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၀၇
၂၃ နာရီ ၂၁ မိနစ်
Posted by မေဓာဝီ at 12:17 AM3comments
Posted by မေဓာဝီ at 5:35 AM6comments
ခုလို အိမ်နဲ့အဝေးမှာ ရောက်နေခိုက် ... ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မဲဇာ ရောက်နေသလို ခံစားနေရပါတယ်။ ကြုံနေရတဲ့ ရာသီဥတုကလည်း လက်ဝဲသုန္ဒရ အမတ်ကြီးရဲ့ မဲဇာတောင်ခြေရတုထဲက အတိုင်းပဲ ဖြစ်နေ တာကိုး။ “သံဝါ ဖြောက်ဖြောက်၊ ဆီးနှင်းပေါက် လည်း၊ မိုးလောက် ပြင်းထန်၊ သွန်းချ ပြန်သော်” ... ဆိုသလို ... တခါတလေကျတော့ ရွာနေတာ မိုးလား ဆီးနှင်းလား မခွဲခြားတတ်အောင်ပါပဲ ... ။ “ရထားယာဉ်သာ၊ နေစကြာလည်း၊ ရောင်ဝါမထွန်း၊ ချမ်းရှာလွန်း၍” ... ဆိုတဲ့အတိုင်း ... နေမင်းကလည်း နောက်ကျမှ ထွက်ပြီး စောစောစီးစီး ၀င်တာမို့ နေမင်းကို ဘယ်လိုပဲ တ-နေပေမဲ့ နေခြည်လည်း မဖြာနိုင်တော့ နွေးလည်း မနွေးနိုင်ဘူးပေါ့။
ဒီလို မဲဇာရောက်နေခိုက်မှာ ... မဲဇာတောင်ခြေ ကဗျာ ရွတ်ဖို့ အကြောင်း တိုက်ဆိုင် လာပါတယ်။ ဒီတပတ် စနေ၊ တနင်္ဂနွေက info weekend မို့ ကျောင်းကနေ အိမ်ပြန် ခွင့်မပြုဘဲ တခြားမြို့မှာရှိတဲ့ ကျောင်းခွဲတွေက ကျောင်းသားတွေရော တခြားနိုင်ငံ အသီးသီးက ပြန်လာတဲ့ ကျောင်းသားတွေရော ကျမတို့ ကျောင်းမှာ အကုန်စုပြီး တွေ့ကြ ဆုံကြတယ်။ ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာ ကျောင်းသား အသီးသီးက ကိုယ့် အတွေ့အကြုံတွေ ပြောပြကြရသလို အတွေ့အကြုံ မရှိသေးတဲ့ ကျမတို့လို ကျောင်းသား သစ်တွေကလည်း လုပ်ဆောင်ချက် တခုခု ဆင်နွှဲလိုက ပါဝင် ဆင်နွှဲကြပါ လို့ ဆိုလာပါတယ်။
သီချင်းပဲဆိုဆို၊ ဂစ်တာပဲတီးတီး၊ ကစားနည်းတခုခုပဲ ကစား ကစား၊ ဒါမှမဟုတ် ကဗျာ ရွတ်ချင်ရွတ် ... ကိုယ်နှစ်သက်ရာ တခုခု ပေါ့ ... ။ ကျမလည်း ဘာလုပ်ရင် ကောင်းမလဲ စဉ်းစားတော့ သီချင်းဆိုဖို့ကလည်း ဒီအသံနဲ့က အဆင်ပြေမှာ မဟုတ်၊ ဂစ်တာကလည်း မတီးတာ ကြာတော့ ကောင်းကောင်း မတီးနိုင်၊ ကစားနည်း ကျပြန်တော့လည်း ဟုတ်တိ ပတ္တိ မလုပ်နိုင်တော့ကာ ... နောက်ဆုံး ကဗျာပဲ ရွတ်မယ်လို့ စိတ်ကူး လိုက်မိတယ်။
ဘာကဗျာရွတ်ရင် ကောင်းမလဲ ... စဉ်းစားတော့ မဲဇာတောင်ခြေ ကိုပဲ သတိရ မိတယ်။ ကံကောင်းချင်တော့ ... အိမ်ကသယ်လာတဲ့ စာအုပ်တွေထဲမှာ “သျှင်ဥတ္တမကျော် တောလား နဲ့ လက်ဝဲသုန္ဒရ အမတ်ကြီးရဲ့ ရတုများ” ဆိုတဲ့ စာအုပ် ပါလာတယ်။ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ နှစ်ဘာသာနဲ့ ထုတ်ဝေထားတာပါ။ ဒေါက်တာဘဟန် ဘာသာပြန်ထားပြီး တချိန်က ကျောင်းသုံးစာအုပ် အဖြစ် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပုံ ရပါတယ်။ ဒါနဲ့ အဲဒီကဗျာပဲ ရွတ်ဖို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီး အင်္ဂလိပ်လို စာသားတွေကို ကွန်ပျူတာနဲ့ စာအမြန်စီရပါတယ်။ စာစီပြီး၊ ကော်ပီကူးပြီးတော့ နာရီကြည့်တော့ ၈ နာရီ ခွဲ ကျော်နေပါပြီ။ အစီအစဉ်က ၁၀ နာရီ ခွဲ လို့ မနက်က ဖတ်ထားတာ ... ဆိုတော့ အေးဆေးပေါ့ .. ဆိုပြီး ... နေနေရာက အစိအစဉ်ကို နောက်တခေါက် ပြန်သွားဖတ် ကြည့်တော့မှ ....
၂၀း၃၀ နာရီ လို့ ရေးထားတာပါလား ... ။
ဒါနဲ့ စာအုပ်တွေ စာရွက်တွေ အမြန်သိမ်းကျုံး ယူပြီး Chinese Embassy ဆိုတဲ့ အဆောက်အဦးဆီ ပြေးရပါတော့တယ်။ ဟိုရောက်တော့ အစီအစဉ်က စ-နေပါပြီ။ အဖွင့်အနေနဲ့ ကျောင်းအုပ် ဆရာမကြီးက ဂစ်တာတီးပြီး သီချင်းဆိုနေပါတယ်။ ကျမ အလှည့်က တတိယမြောက်။ ထိုင်ခုံမှာ ထိုင် ခဏနားပြီး အမောပြေလောက်တဲ့ အချိန်မှာပဲ ... ကျမ နာမည် ခေါ်ပါတော့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ ... ကော်ပီကူးထားတဲ့ စာရွက်တွေ တယောက်ကို ဝေခိုင်း၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မိတ်ဆက်၊ ကဗျာဆရာရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိ အကျဉ်းချုပ်ကလေး ပြော (တကယ်တော့ စာရွက်ကြည့်ဖတ်တာပါ) ပြီးတော့မှ ... ကဗျာကို စရွတ်ပါတော့တယ် ... ။
((( အဟမ်း ... )))
ရွတ်ပြီးသွားတဲ့ ရတုကို “ဒီနေရာမှာ”သာ သွားဖတ် ကြည့်ကြပါတော့ ... ။
အင်္ဂလိပ်လို ဘာသာပြန်ထားတာကိုတော့ ဒီမှာ ဖော်ပြ ပေးလိုက် ပါတယ်။
Myanmar Classical Poem (Radu)
Written by Letwe`thondara (1772)
Translated by Dr. Ba Han (M.A., PhD, D.Litt, LLD (1964)
From the wooded foot of Meza Hill girt with its gushing stream my heart pants for the distant City of gold. Behold! The fold of the stars glows with the stately splendour of the conquest-crowned eminence graced with sacred fabrics. They stand out resplendent in six kindred rays like Zabudipa’s luminous Lamp. First in order shines Gugyi-thakin – Grand Sire’s golden deed. Next I proceed to tell on single hand other associate shrines – Shwe-Linbin, Shwe-chin-the-mwe, Shwe-ze-di-gyi. The gay galaxy set off by the brave palace’s hue, lights up the air like repeated flashes across the blue. My songless heart sighs of these haunting scenes. Alas! Alas! Because the City is afar I call up the old familiar views and fancy to myself “Here is the City, there are the shrines and over these lies the palace.”
The lovely river of the lower region abounds in sandy shoals ringed about with the enclasping flow. Whatasoul-enchanting sight to see! To me, it seems as remote asafar-off isle. And here, the clear-cut Meza river clad with thickets and tinged withadarksome tint, flows through the soundless forest that is folded in mist. The Pole-star lies hidden far from sight while I groan foraglimpse of the glorious sun. My bearings I take in vain, and again and again deep amazement invades my shattered senses. I sink and sink under the stress of thought, and the sylvan shades wearabuffling air. An early breath of southerly breeze heralds the approach of seasonal winds. My mind reels and my feeling heart is filled with fadeless longings because of the chilling breeze.
The residents of Meza cling to hoary custom and hold the Nyaungye carnival. A motley crew in reverent awe and ardent faith pray before the Golden Cave that lends endless charms to the cloud-kissed height rising from the heart of Meza Glen. The self-same mountain is shrouded in gloom and its exhalations wreathe themselves round every range. The sullen scene seems one welded mass. Again, with no trace of rain, the soft wind whistles and snowflakes fall fast and thick like heavy showers. You may even hear the drip-drop ring through the air. And Phoebus’ fair chariot coursing its daily round from Yugan’s crown, ceases to fling its flying flames. When it is biting cold, I wait and watch for the noonday light, because the dancing, flitting fancies help kill the leaden-footed hours.
နားထောင်ကြတဲ့ ပရိသတ် အပေါင်းကတော့ ကောင်းသလား ဆိုးသလား မသိ၊ အားနာပါးနာနဲ့ လက်ခုပ်သြဘာ ချီးမြှင့်ကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကျမလည်း ... ပီတိတွေ ဖြာရင်း ဘလော့မှာ တင်လိုက်ရလေသတည်း ... ဆိုပါတော့ ... ။
၈၊ ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၀၇
Posted by မေဓာဝီ at 12:12 AM 1 comments
ဒီတပတ် ကိုပြူးကျယ်အတွက် ပေးစာမှာ အရင်တပတ်က အဆက်ဖြစ်တဲ့ ရတုအခန်းကို ဆက်မရေးသေးဘဲ ဟိုးရှေ့က ဒွေးချိုးအခန်းကို ပြန်ကောက်ပါရစေ ဦးနော် ... ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ... ဒီကွန်မန့်လေးကြောင့်ပါ။
Harry has leftanew comment on your post "ကိုပြူးကျယ်သို့ ပေးစာ … အပိုင်း (၃)":
Ma Maydar Wii,
You are kindly requested to post the writing method, rudiments and principles of "Dwe Cho"
ဒီကွန်မန့်ရတဲ့ အချိန်မှာ ကျမအနားမှာ ကိုးကားနေကျ ကဗျာ့စွယ်စုံကျမ်းကြီးက ရှိမနေပါဘူး။ ကျောင်းကို သယ်မလာမိဘူး ဆိုပါတော့။ ဒါနဲ့ပဲ တလောကမှ အိမ်ရောက်တုန်း စာအုပ်ကြီး သယ်ချလာပြီး ဒွေးချိုးအခန်းကို ပြန်ရှာဖတ်ရပါတယ်။ ပေးစာ အပိုင်း (၃) မှာ ကျမအပျင်းထူပြီး ဒွေးချိုးစပ်နည်း မဖော်ပြခဲ့မိတာ ... အခု ကိုဟယ်ရီရဲ့ ဒီကွန်မန့်ရတော့ ကျမ ပျင်းနေလို့ မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။
ချက်ချင်းမရေးဖြစ်ဘဲ ကြာနေရခြင်းကတော့ ... ဒီပို့စ်ကို တခြားသူကို ရိုက်ခိုင်းရင် အဆင်မပြေမှာစိုးတာနဲ့ ကိုယ်တိုင် ရိုက်နိုင်မယ့် ရက်ကို စောင့်နေရလို့ ချက်ချင်း မတင်ဖြစ်တာပါ။ စက်အိုအိုလေးထဲ မြန်မာဖောင့် မရှိပေမဲ့ ကိုရန်လေး ညွှန်းထားတဲ့ 'ဒီလင့်ခ်' ကနေ ၀င်ရိုက်လို့ အဆင်ပြေနေလို့ အခုရက်ပိုင်း ပို့စ်တွေမှာ ကိုယ်တိုင် စာရိုက်နိုင်နေပါပြီ။ ကျမ အဆင်မပြေခိုက် ကူညီပြီး စာရိုက်ပေးကြတဲ့ ကိုစေးထူးနဲ့ ကိုရန်လေးကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ထပ်ပြောလိုက်ပါရစေ ... ။
လေရှည်နေတာနဲ့ပဲ ဒွေးချိုးစပ်နည်းဆီ မရောက်တော့ဘူး။ ဒွေးချိုးစပ်နည်းကို ပြောပါတော့မယ်။
(၁) အချိုးအားဖြင့် ... အခံတချိုး၊ အအုပ်တချိုး ဆိုပြီး နှစ်ချိုးသာ ထားရပါမယ်။
(၂) ပိုဒ်ရေအားဖြင့် ... အချိုးတခုစီမှာ အပိုဒ်ငယ် ၂-ပိုဒ်မှ ၅-ပိုဒ် ထားနိုင်ပါတယ်။
(၃) အက္ခရာလုံးရေအားဖြင့် ... အဲဒီအပိုဒ်ငယ်တွေရဲ့ အစပိုဒ်မှာ အက္ခရာ ၃-လုံး၊ အလယ်ပိုဒ်မှာ ၅-လုံး သို့မဟုတ် ၆-လုံး၊ အဆုံးပိုဒ်မှာ ၄-လုံး ထားရပါမယ်။
(၄) အစပ်ကာရန်အားဖြင့် ... အခံချိုးရဲ့ အဆုံးကာရန်နဲ့ အအုပ်ချိုးရဲ့ အဆုံးကာရန် ထပ်မိစေရပါမယ်။
အပိုဒ်ငယ်တွေမှာ ... ပထမပိုဒ်ရဲ့ နောက်ထက်ဝက်က အက္ခရာ ၁-လုံး ၂-လုံးနဲ့ ဒုတိယပိုဒ်ရဲ့ ရှေ့ထက်ဝက်က အက္ခရာ ၁-လုံး ၂-လုံး ကာရန်ထပ်မိရပါမယ်။ နောက်တခါ ... ဒုတိယပိုဒ်ရဲ့ နောက်ထပ်ဝက်က အက္ခရာ ၁-လုံး ၂-လုံးနဲ့ တတိယပိုဒ်ရဲ့ ရှေ့ထက်ဝက်က အက္ခရာ ၁-လုံး ၂-လုံး ကာရန်ထပ်မိရပါမယ်။ အဲဒီလို အပိုဒ်ငယ်တိုင်းရဲ့ နောက်ထက်ဝက် ရှေ့ထက်ဝက် ခွဲပြီး ကာရန် အစပ် နှစ်ချက် နှစ်ချက် ဆင့်ကာ ကာရန်ကူးပြောင်းပြီး အချိုးတခု ပြီးဆုံးအောင် ဆက်စပ်သွားရမယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
တော်တော်လေးများ ရှုပ်သွားသလား မသိပါဘူး။ နမူနာကို ကြည့်ရင် ရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
ဒွေးချိုး၏ မူ၊ နည်းယူဖို့ စပ်ထုံး။
ဥပဒေ ပုံစံရေးမယ်၊ တွေးလို့ စီကုံး ... ။
အဲဒီ ဒွေးချိုးမှာ ကြည့်မယ်ဆိုရင် ... ခုလို တွေ့နိုင်ပါတယ်။
(ခံချိုး) ပိုဒ်ရေ - ၁။ ဒွေးချိုး၏ - မူ ... (လုံးရေ ၄)
…...... ပိုဒ်ရေ - ၂။ နည်းယူဖို့ - စပ်ထုံး။ (လုံးရေ ၅)
(အုပ်ချိုး) ပိုဒ်ရေ - ၁။ ဥပဒေ - ပုံစံရေး (မယ်) ... (လုံးရေ ၆)
…......... ပိုဒ်ရေ - ၂။ တွေးလို့ - စီကုံး။ (လုံးရေ ၄)
ခံချိုးရဲ့ ပိုဒ်ရေ ၂ မှာ (မယ်) ဆိုတဲ့ စာလုံးကို ထည့်ပြီး မရေတွက် ရပါဘူး။ ကာရန်ဌာနမှ လွတ်တဲ့ ၀ိဘတ် အက္ခရာ၊ ပဒါလင်္ကာရ အက္ခရာ (ကဗျာအဖွဲ့အနွဲ့အတွက် တန်ဆာဆင်ထားတဲ့ အက္ခရာ) တွေကို ချန်လှပ်ပြီး ရေတွက်ရမယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
ရှေ့ထက်ဝက် နောက်ထက်ဝက် ခွဲတယ်ဆိုတာကတော့ ... နမူနာပြထားတဲ့ ဒွေးချိုးမှာ ... (ဒွေးချိုး၏) ဆိုတာက ရှေ့ထက်ဝက်၊ (မူ) က နောက်ထက်ဝက်၊ အဲဒီလို ခွဲရမယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။ အခုပြထားတဲ့ ကာရန်ယူနည်း အပြင် မူလတပိုဒ်လုံးကို တပိုဒ်လုံး ကာရန်ထပ်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် မူလပိုဒ်ရဲ့ လိုရင်း ပဓာန အဆုံးကာရန် တလုံးကိုသာ ထပ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ထပ်မိစေပြီး တွန့်ပိုဒ်တွေ ထည့်ချင်သေးရင်လည်း လိုရာ မူလပိုဒ်တို့မှာ တတွန့် နှစ်တွန့် ကွန့်ချင် ကွန့်နိုင်ပါသေးသတဲ့။ ဒါပေမဲ့လည်း အတွန့်တွေ တအားများရင် လေမမီ စည်းမမီ ဖြစ်တတ်တယ်လို့ ဆိုထားပါသေးတယ်။
(၅) လေပြင်းလေလျော့ အားဖြင့် ... ခံပိုဒ်၊ အုပ်ပိုဒ်တွေရဲ့ အဆုံး အက္ခရာတွေမှာ "အ-အား-အိ-အီး-အူး" စတဲ့ လေပြင်းသံ အက္ခရာတွေကိုသာ ထားရပါမယ်။ အပိုဒ်ငယ်တိုင်းမှာ အပိုဒ်တပိုဒ် ရဲ့ ရှေ့ထက်ဝက်မှာ "အာ-အီ-အူ" စတဲ့ လေလျော့ အက္ခရာရှိရင် အဲဒီအပိုဒ်ရဲ့ နောက်ထက်ဝက်မှာ လေပြင်း အက္ခရာ တွေပဲ ထားရပါမယ်။ တကယ်လို့ ရှေ့ထက်ဝက်မှာ လေပြင်း အက္ခရာရှိနေရင်တော့ နောက်ထက်ဝက်မှာ လေလျော့ အက္ခရာ ထားရမယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
ဥပဒေသတွေကတော့ ဒီမျှပါပဲ။ နမူနာ ဒွေးချိုးအဖြစ် ပပငယ်လေ ၀င်းဝင်း ပတ်ပျိုးမှ သဖြန်ဒွေးချိုးကလေးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
နှုန်းစံဖက်ဝေး ... ။ ... ။
ဒါဆိုရင် တောင်းဆိုထားသူ ကိုဟယ်ရီနဲ့တကွ ကိုပြူးကျယ်လည်း ကျေနပ် လောက်ပါရဲ့။ ည သန်းခေါင်ကျော် ၁-ချက်တီးလုပြီမို့ ... ကျမလည်း အိပ်ပါရစေတော့ ... ။
ကိုပြူးကျယ်နှင့်တကွ မြန်မာကဗျာ ချစ်မြတ်နိုးသူအပေါင်း ရွှင်လန်း ချမ်းမြေ့ကြပါစေ ... ။
Posted by မေဓာဝီ at 12:50 AM 1 comments
Labels: ကိုပြူးကျယ်သို့ ပေးစာများ
Posted by မေဓာဝီ at 9:37 PM3comments
Posted by မေဓာဝီ at 11:29 PM4comments
Posted by မေဓာဝီ at 9:55 PM5comments
ဆောင်တော်ကူးရနံ့ ညမွှေးပန်းရနံ့တွေ ထုံလွှမ်းတဲ့
ဓမ္မ တေးသံ လွင့်ပျံလာတဲ့အခါ
တယောက်ထဲ အထီးကျန်နေရင်း …
ကမ္ဘာကြီးဟာ ရွာကြီးတရွာတဲ့
ဘာလို့အဝေးကြီး ဖြစ်နေရတာလဲ … ။
အလွမ်းတွေကို သယ်ဆောင်လာတယ် ….
တိုက်ခတ်ပေးလှည့်ပါကွယ် … ။
Posted by မေဓာဝီ at 11:21 PM5comments